Sidee loo qabtaa SEO caalami ah?
Ujeedada ugu muhiimsan ee mulkiilayaasha bogagga waa in ay gaaraan dhagaystayaasha caalamiga ah ayna sii ballaariyaan joogitaankooda ganacsiga. Fursada ugu wanaagsan ee lagu hormarinaayo ganacsigaaga internetka adduunka waa in la hirgeliyo hannaanka tamarta raadinta google raadinta. Waxay bixisaa hab qiimo-ku-ool ah si kor loogu qaado dhagaystayaasha aad dooneysey oo aad ku gaarto suuqa banaan - eleaf tank coils.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad u baahan tahay si aad tixgelisid tixraaca ah istaraatiijiga aduunka ee ku guuleystay SEO. Waa muhiim in la ogaado waxa ay qaadato si wax ku ool ah loo qorsheeyo khayraadkaaga iyo dhisida istiraatijiyad markii loo baahdo wakhti iyo baaxad.
Qodobkani, waxaanu ku maraynaa marxalado aasaasi ah oo ka mid ah geeddi-socodka dejinta raadinta caalamka.
Marxaladda ugu horreysa ee ololehaaga casriga ah ee caalamiga ah, waa inaad sameysid suuq dhammeystiran cilmi baaris. Waxay kaa caawinaysaa inaad qiimeyso kartida suurtagalka suuqa kasta oo caalami ah iyo sidoo kale wuxuu ku siinayaa fursad aad ku dajiso bartilmaameedkaaga.
Waa inaad qeexdaa xaaladaada ganacsiga ee hadda suuqa internetka, hubi inta ay socoto waddooyinka aad ka heshay dalal kala duwan. Iyada oo gacan laga helayo Google Analytics, waxaad ka hubin kartaa taraafikada ka imanaysa gobol kasta iyo luqad kasta goobtaada. Waxaa intaa dheer, waxaa muhiim ah in la ogaado shuruudaha raadinta ee soo jiidanaya aragti raadinta iyo taraafikada taranka ee mid kasta oo ka mid ah suuqyada caalamiga ah ee la aqoonsaday. Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah si aad u riixdo qiime iyo is-beddelka bogagga soo booqda ee ka yimid mid kasta oo ka mid ah suuqyada caalamiga ah ee ugu sarreeya. Macluumaadkan waxaad ka heli kartaa warbixinnada geo sida qaybta dhagaystayaasha. Tilmaamahan tayada ayaa kaa caawin doona inaad qeexdo suuqyada caalamiga ah ee hadda jira ee aad ka sii horumarin karto adeegyadaada ama alaabooyinkaaga iyo sidoo kale inaad fiiriso dabeecada aad martid boggaga caalamiga ah ee hadda jira.
Marxaladda labaad ee marka aad horay u kala soocootay dalalkiina sareeya aadna tixgelisay suuqyadii aad rabto, waa waqtigii qiimeeyaan kartida mid kasta oo ka mid ah wadamada ugu sareeya. Si aad uhesho kartidaada, waxaad u baahan tahay inaad samayso cilmi-baaris muhiim ah. Waxaad u baahan tahay inaad raadiso shuruudaha raadinta ee ku habboon ee loo isticmaalo sida weydiimaha ay soo booqdaan website-kaaga soo booqanaya. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad qiimayso mugga raadinta dabiiciga ah ee shuruudaha raadinta iyo heerkooda tartanka gudaha hal shisheeye. Macluumaadkaaga darajooyinkaaga hadda ee shuruudaha raadinta ayaa kaa caawin doona inaad qiimeyso oo aad wanaajiso kartidaada raadinta bani-aadamka ee adduunka. Si aad u hesho xogtan qiimaha leh, waxaad isticmaali kartaa qalabkan soo socda - Naqshad fudud Auto, Google Qorshe-wax-u-qabso ama Tusaale ahaan. Sidaa darteed waxaad heshay macluumaad cilmi baaris ah oo muujinaya waddamada iyo suuqyada dibadda hela gaadiidka organic iyo macmiilka caalamiga ah ee isticmaala macaamiisha caalamiga ah si ay u helaan boggaaga. Hadda, waa waqtigii lagu beegsan lahaa waddamada aan haysanin raadinta ku filan. Waxaad sidoo kale diiradda saari kartaa luuqada haddii aad dareentid in mugga wadada uu yaryahay marka la qiimeeyo suuq kasta oo dibadeed. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka hesho taraafikada la beegsanayo dhammaan suuqyada caalamiga ah oo aad u guurto habka ugu fiican ee waddanka lagu beegsanayo.